Home » Toerana fitsangatsanganana » Mamono an'i Venise ny fizahan-tany ary miady ny tanàna
Mamono an'i Venise ny fizahan-tany. Ary ny tanàna dia miady amin'ny drafitra hampihenana ny ampahany mampidi-bola indrindra sy tsy dia misy tombony amin'ny vondron'olona mpitsidika - "day-triper".
Nanambara ny tanànan'i Venise fa handoa saram-pizahan-tany hatramin'ny 10 € (11.35 $) isan'olona ny mpitsidika isan'andro.
Mpitsidika maherin'ny 24 tapitrisa no tonga any Venise isan-taona, miaraka amin'ny 15 tapitrisa eo ho eo mitsidika ny tanàna amin'ny dia iray andro fotsiny.
Nimonomonona hatry ny ela ny mponin'i Venise fa ny mpandeha an-tongotra sy ny mpandeha an-tsambo dia mankafy izay rehetra atolotry ny tanàna Lova Iraisam-pirenena fa tsy mandray anjara lehibe (raha misy mihitsy) fanomezana ara-toekarena ho an'ny kitapom-bolan'ny tanàna. Ny mpitsidika sasany dia mitondra ny sakafony manokana, ka tsy mandany vola na dia any amin'ny kafe sy trano fisakafoanana Venetiana aza.
Ny «sarany mpandeha an-tongotra» vaovao dia eo anelanelan'ny € 2.50 ($ 2.84) mandritra ny vanim-potoana ambany sy ny € 10 ($ 11.35) mandritra ny vanim-potoana avo isaky ny mpitsidika ary azo inoana fa hampidirina amin'ny vidin'ny bus, ny fiaran-dalamby na ny sambo fitsangantsanganana an-tsambo. .
Ny filankevitry ny tanànan'i Venise dia niady hevitra nandritra ny taona maro raha hametraka tetika tapakila miaraka amin'ny tapakila isan'andro voafetra, ka hampihenana ny isan'ny olona, ​​avela hitsidika isan'andro.
Ny hetra amin'ny fizahan-tany dia hisolo ny hetra hotely efa misy, izay nitentina € 34 tapitrisa € tamin'ny 2018. Ny hetra amin'ny hotely dia ampandraisina amin'ireo mpitsidika tsy maharitra alina ao an-tanàna, fa tsy manilika ireo mpandeha an-tsambo sy mpandeha an-tsambo.
Antenaina fa ny làlan'ny hetra vaovao ho an'ny mpitsidika dia dingana iray mankany amin'ny lalana marina ary hampihena ny isan'ireo mpivarotra an-tsokosoko mankany an-tanàna.